Nhau - Nhanganyaya kuSlewing bearings emagetsi emhepo
Nhanganyaya kuSlewing bearings emagetsi emhepo
Slewing kuberekainonzi zvakare turntable bearing, iyo inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri uye inonzi "mubatanidzwa wemuchina". Icho chinhu chakakosha chekufambisa chakakosha kumuchina unoda kutenderera kufamba pakati pezvinhu zviviri, asi zvakare inofanirwa kutakura axial simba, radial simba, uye kurereka nguva panguva imwe chete.
Iyo Slewing kubereka ndiyo musimboti wemhepo turbine, Slewing kubereka kwemhepo turbine inoshandiswa seyakawedzera yakakura kubereka, iyo inonyanya kushandiswa kune iyo pombi uye yaw system: iyo kubereka kwenamo inoshandiswa kubatanidza vhiri nebanga, uye iyo yaw inoberekainoshandiswa kubatanidza shongwe uye iyo unit. Simba remhepo rekucheresa rinotakura rakaoma chaizvo kugadzirisa nekuda kwehukuru hwayo uye yakaoma nzvimbo yekumisikidza; Uye zvakare, pasi penzvimbo inoshanduka yekushanda kwepurazi remhepo, chinhu chacho chakaomarara kurongedza, uye zvinonetsa kwazvo kukatanura nekuchengetedza, zvichikonzera mutengo wekugadzirisa wakakwira. Zvakare, kana iyo slewing inotakura ikakundikana, zvinokanganisa zvakananga mashandiro anoita turbine yemhepo, uye kunyange kukonzera kudzima.
Mhepo turbines parizvino kazhinji inotora a -kaviri-mutsara bhora mana-poindi yekubata bhora inobereka Chimiro chekusangana nemhando dzakasiyana dzekumhanya kwakasiyana kwemhepo pane kona kona. Mumakore achangopfuura, matambudziko ekuvimbika anokonzerwa nekureruka uye kwakaipa kuwedzera kweye urefu kunyange haigone kudzivirirwa nevakawanda vanogadzira michina muindasitiri. Kukundikana kwematch bhegi mabheyari kwaonekwa, uko kwave kunorwadza nzvimbo kune ese emumba nemaindasitiri ekunze, uye indasitiri inoda kuratidza.
Simba remhepo rekudyara inzvimbo ine njodzi huru, uye kuverenga kwekudzoka uye chiyero chekudzoka kunoenderana nekuvimbika. Kana chinetso chinotakura chinotyisa chikaitika mukati mehupenyu hwese, senge nguva yekuzorora, kutsiva, uye kunyange zviitiko zvekuchengetedza, iwo mhedzisiro iyo vanogadzira uye vanogadzira vagadziri vasingade kuona.Xuzhou Wanda Slewing inobereka yakazvipira kune yemhando yepamusoro uye yakasimba-kugadzikana slewing kubereka, uye yakagamuchira kubvumirana kurumbidzwa mune ino indasitiri mutsara. Kupa yakatsiga uye yakavimbika pani mabheyaringi emhepo turbines ndiko kusingaregi kutsvaga kwevashandi vese veWanda. Ibasa redu risingadzoreki kudzikisira njodzi yekukundikana uye kudzora kurasikirwa kwehupfumi uye njodzi dzekuchengetedza.